ဒေါက်တာမလေး doctormalay.com >
ဇတ်ကားသစ်တွေကြည့်ဖို့ ဒီကိုသွားလည်ပါ အကောင့်ဆောက်ထားပါherhaze.com
"အောကား", "အောစာအုပ်", "လိုးကား", "ဖူးကား", "ဆောက်ဖုတ်", "ဆောက်ပတ်", "ဒေါက်တာမလေး", "မြန်မာကား", "myanmar sex movie", "myanmar sex videos", "myanmar fuck movie",
Nang Hay Man
မင်မင် ရှင့် နေကြာပန်းနဲ့ ဗီဒီယို အသစ်ကြားလို့ ဘယ်မှာ တင်ထားတာပါလဲ ရှင်
21 Oct 15:02
18 Oct 23:09
telegram grop link လေးတင်းပါအုံးခဗျာ
18 Oct 20:25
16 Oct 15:27
Bro တို့ရေ ပိုက်ဆံ လဲပီးပြီ...email လေးဘာလေး စစ်ကြပါအုံးဟ
16 Oct 11:49
LINE ထဲက ကားတွေကို အပြင်ပြန်ထုတ်တာတွေ့ရင် ချက်ချင်းဘန်းခံရပါမယ် နောက်ပြီးတော့ ၁၆ နှစ်အောက်တွေ တောင်းရင်လည်းဘန်းပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ အတက်နိုင်ဆုံးစိစစ်ပြီးတော့ လုပ်ထားတာမို့လို့ မဟုတ်တာတွေလာတောင်းရင် ဘန်းပါမယ် အဲတော့ သေချာပြီ လိုက်နာနိုင်တယ်ဆိုမှ ဝင်ပါ
16 Oct 01:49
Admin ရေ..ကျွန်တော်က viber မသုံးဘူး...အဆင်ပြေလုပ်ပေးပါ့လား
Admin ရေ...tonelone444gmail.com ကိုစာပြန်ပါအုံး
LINE မှာ တင်ထားတယ် ကားတွေ သောင်းချီနေပြီ ဒီမှာ ရှော့ခ်ရှိလို့လေ line vip ကိုလာခဲ့လေ
15 Oct 11:27
3 လ ငါးထောင် ဒစ်စကောင့် အစီအစဉ်လေးကို လုပ်မလို့ တိုင်ပင်နေကြပါတယ်..။ ဒီလ ၂၅ ရက်နေ့ကနေ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါတယ် ဒီအစီစဉ်မှာ လက်ရှိ vip ဝင်ထားတဲ့သူတွေ မပါဝင်ပါဘူး သက်တမ်းကုန်သွားသူတွေ မဝင်ရသေးသူတွေအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ် ဖုန်းကတ်နဲ့ဆိုရင် ခြောက်ထောင် ပေးရပါမယ် တစ်ဆင့်ခံပြန်ရောင်းရင် ငွေဖြတ်လို့ပါ။ wave money. Kpay. btc. paypal နဲ့ ငွေပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီ vip ဝယ်ရင် doctormalay.com herhaze.com ဝဘ်ဆိုက် ၂ ခုမှာ vip ရပါမယ် ..။ ပြီးရင် telegram မှာ vip ရပါမယ်။ LINE ကတော့ မရပါဘူး သပ်သပ် ဝယ်ရပါမယ် သူက သီးသန့်ကားတွေပဲ တင်တာမို့လို့ ပုံမှန်ဈေးထက် လျှော့ဖို့ အဆင်မပြေနိုင်ပါ.။ လေးလတစ်သောင်းပဲ ပေးရပါမယ်. နှစ်ကုန် ရင်တော့ ဒစ်စကောင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်. ၁၆ ၁၇ ကားတွေကို telegram မှာ တင်လို့မရတဲ့အတွက် LINE မှာပဲ အဲကားတွေ ရှိနေပါမယ်။ဒစ်စကောင့်ပေးတဲ့ ရက်အတွင်းပဲ ဆက်သွယ်ပေးစေလိုပါတယ် ၂၅ ရက်နေ့စပါမယ် ဆက်သွယ်ချင်ရင် viber 09772837170 စာပို့ပါ [email protected] ကိုစာပို့လို့ရပါတယ် t.me/doctormalay ကိုစာပို့လို့ရပါတယ်။
15 Oct 03:30
14 Oct 11:25
10 Oct 14:29
https://doctormalay.com/private.php?action=send&uid=1 ဒီလင့်ကို နှိပ်ပြီး VIP ဝယ် လေးလတစ်သောင်း
ဒီမှာ member ဝင်လို့မရတော့ဘူးလား? herhaze မှာပဲဝင်ရတာလား? ဘယ်လိုပြောင်းသွားတာလဲ?
06 Oct 00:58
04 Oct 00:36
☘️ ဂမ်းမျိုးစုံပြီး မန်ဘာသစ်၊ဟောင်းများအတွက် အထူးပရိုမိုးရှင်း များပြားခြင်း ☘️ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက် မောင်း၊ဘော်ဒီများကို မြန်မာကြေးမှန်မှန် 1000 ကျပ်ကနေ စ လောင်းလိုရပြီ ☘️ နာမည်ကြီး jdb စလော့ ငါးပစ်ဂိမ်းမျိုးစုံ ပါမယ်နော် ☘️ ဘဏ်မျိုးစုံ payment မျိုးစုံ သုံးလိုရမယ်. ☘️ငေသွင်း၊ငွေထုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ၂၄နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ် ☘️အကောင့်ဖွင့်လည်း လွယ်ကူတယ် ☘️ဝက်ဆိုဒ်လင့် - https://777kyat.net/Doctormalay
အရင္တင္ေနက် download link ကအဆင္ေျပတယ္။ ခုဒီဟာနဲ့အဆင္မေျပဘူး bro
26 Sep 20:02
23-9-21 က download link ကျကည့္မရလုိ့။ အရင္ကေတာ့ VPN ခံျကည့္ရတယ္။ ခု VPN က expire ျဖစ္သြားလုိ့၊ တျခား download ရမယ့္ေနရာလုပ္ေပးပါအံုး
http://herhaze.com/showthread.php?tid=19 မြန်မာ ဓါတ်ပုံ ၂၀၀ တင်ထားတယ်
16 Sep 19:13
vip ဝင်ချင်ရင် ဒီမှာ စာလာရေးပါ ▼ 10-22, 08:31 ဂြိုလ်သား ဝဘ်ဆိုက်နဲ့ ပတ်သတ်သမျှ
indonesia ▼ 10-19, 02:49 Administrator VERY GOOD THAILAND FOODS
မြန်မာဓါတ်ပုံစုစည်းမှု့များ ၆ ▼ 10-18, 02:07 Administrator မြန်မာဓါတ်ပုံများ ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။ Myanmar Photos
161021 ▼ 10-16, 15:32 Administrator ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
81021 ▼ 10-14, 02:49 red-devil ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
111021 ▼ 10-13, 04:25 Administrator ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
61021 ▼ 10-07, 05:21 Administrator ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
Indonesia ▼ 10-04, 09:14 Administrator အာဆီယံ ဇတ်ကားများ asian scandal
21021 ▼ 10-03, 21:32 Izzay ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
21021 ▼ 10-03, 04:28 Administrator ထူးရှယ် ဇတ်ကားတွေ VIP ELITE SECTION
ဖိလစ်ပိုင် ရှယ်ကြီးတွေ ▼ 10-01, 09:22 Administrator အာဆီယံ ဇတ်ကားများ asian scandal
29921 ▼ 09-29, 20:28 Administrator ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
23921 ▼ 09-29, 19:40 HorusBlade ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
2020 Philippine Special3▼ 09-28, 04:36 Administrator အာဆီယံ ဇတ်ကားများ asian scandal
17921 ▼ 09-27, 02:02 red-devil ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ (24 users browsing)
Moderated By: TMP
1,788 3,848 161021
မြန်မာဓါတ်ပုံများ Myanmar Photos
မြန်မာဓါတ်ပုံများ ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။ Myanmar Photos (8 users browsing)
106 1,034 မြန်မာဓါတ်ပုံစုစည်းမှု့မျ...
10-18-2021, 02:07 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇတ်ကားများ vip forum
အရမ်းမိုက်တဲ့ဇတ်ကားတွေရှိတယ် vip room
စျေးကြီး ရှားပါး ဇတ်ကားများ
Moderated By: TMP, player
ထူးရှယ် အခန်း ElITE VIP
ဒီနေရာက စိစစ် ရွေးချယ်ထားတဲ့ သူတွေ အတွက်ပါ။
ထူးရှယ် ဇတ်ကားတွေ VIP ELITE SECTION
မြန်မာတွေ အတွက် သီးသန့်
မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရမယ်။ အကောင့် ဆောက်ထားရမယ်။
ဝဘ်ဆိုက်နဲ့ ပတ်သတ်သမျှ (3 users browsing)
ဒီနေရာမှာ အသစ်တင်တိုင်း ဖတ်ကြပါ။
177 1,588 vip ဝင်ချင်ရင် ဒီမှာ စာလာ...
ကာမ ဇတ်လမ်း စာအုပ်များ (3 users browsing)
212 404 stay over
အာဆီယံ ဇတ်ကားများ asian scandal (1 user browsing)
42 144 Indonesia
အခမဲ့ ကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းရာနေရာ
3 11 ထိုင်း တရုတ် ရှယ် အနှစ်လေ...
01-02-2021, 12:36 AM
Nice Thailand Special
VERY GOOD THAILAND FOODS (1 user browsing)
5 65 indonesia
173 users active in the past 15 minutes (3 members, 1 of whom is invisible, and 168 guests).
Bing, Google, littledevil666, mgmgmgmg
6,934 users Who's online Today (363 members 30 of whom are invisible and 6,571 guests).
, A Han
, Ahtan Kaung
, Aung gyi
, Baya ni
, Chan gyi
, Chann wai lover
, Char Dite
, CR aung gyi
, cute vargin fucker
, Devil Gniap
, Han gyi
, Hello it's me
, Joney Jame
, Jue Jue
, Khin Mg
, Ko Ko Mg
, Ko ko winn
, Ko Luphyo
, ko myo min
, lar htar
, lusoe mdy
, Maung Maung Toke
, Mg Mg Aye
, Mg Nagar
, Myat Bhone
, Myo Myo47
, Nang Hay Man
, Nay thwaye
, Nay Won Ni
, porn porn
, Sa Aung
, Saw Balarbuu
, Shal Good
, Show Gyi
, Steve yin
, Su Myat Lay
, Taw Thar Gyi
, Tayzar Nyi Nyi
, Than Min Aung
, Thet Swe
, U SI
, Wana Kyaw
, White Fox
, Zaw Hein
, Google, Bing, Internet Archive, Facebook, Twitter
[ Guests ][ Registered ][ Super Moderators ][ Administrators ][ Awaiting Activation ][ Moderators ][ Banned ][ VIP ][ VIP ELITE ]
Our members have madeatotal of 9,665 posts in 2,678 threads.
We currently have 2,283 members registered.
Please welcome our newest member, Riki
The most users online at one time was 3,813 on 08-30-2019 at 10:45 PM
Current time: 10-24-2021, 04:23 AM Powered By MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.